Ruushka iyo Shiinaha oo codka qayaxan ku diiday cunaqabataynta Suuriya | Baydhabo Online
Waa markii todobaad ee Ruushku uu codka qayaxan ku hor istaago qaraaro uu soo jeediyay golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay si uu u badbaadiyo dawladda Suuriya.
Shiinaha ayaa sidoo kale lix jeer qodka qayaxan ku diiday qaraaro uu Golaha Ammaanka ee Qaramamada Midoobay soo jeediyay oo ka dhan ahaa Suuriya tan iyo markii ay halkaas ka billaabatay colaadda sokeeye sanadkii 2011kii.
Suuriya ayaa aqbashay in ay burburiso hubkeeda kiimikada ah sanadkii 2013kii, heshiiskaas oo ay ka wada xaajoodeen Ruushka iyo Maraykanka.
Maxaa Suuriya lagu eedeeyay?
Dawladda Suuriya ee uu hogaamiyo madaxweyne Bashaar al-Asad ayaa lagu eedeeyay in ay weerarro ay kiimiko u adeegsatay ku qaaday shacabkeeda. eedaymahaas oo ay diiday.
Sikastaba ha ahaatee baaritaan ay samaysay hay’adda Qaarammada Midoobay ula socota hubka kiimikooyinka ah ayaa lagu ogaaday in ciidammada Suuriya ay adeegsadeen hub kiimiko ah saddex jeer sanadkii 2014kii iyo 2015kii. Warbixintaas ayaa lagu sheegay in ciidammada Suuriya oo adeegsanaya diyaaradaha qumaatiga u kaca in ay chlorine ku rideen goobaha ay jabhaduhu maamulaan labo jeer bishii Maarso ee sanadkii 2015kii mar kalana ay isticmaaleen bishii Abriil ee 2014kii.
In chlorine hub ahaan loo adeegsado ayaa la mamnuucay 1997 axdigii hubka kiimikooyinka ah
Kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka ayaa sidoo kale adeegsatay kiimikooyin halis ah sida ay hay’dda hubka la socota sheegtay.
Qaraarka Qaramada Midoobay muxuu dhigayay?
Qaraarka Talaadadii waxaa soo diyaariyay Maraykanka UK iyo Faransiiska.
Haddii la aqbali lahaa waxaa laga mamnuuci lahaa in Suuriya laga iibiyo diyaarada qumaatiga u kaca, wuxuuna horseedi lahaa cunaqabatayn la saaro 11 taliyeyaal oo Suuriyaan ah iyo toban kooxood oo lala xiriiriyay weerarada hubka kiimikada ah.
Sagaal xubnood oo ka tirsan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa taageeray qaraarka waxaana ka soo horjeedsaday Shiinaha, Ruushka iyo Bolivia.
Saddexdii dal ee u dambeeyay ee xubin ka noqda Gollaha Ammaanka oo kala ah Masar, Kazakhstan iyo Itoobiya ayaa ka baaqday kulankaas. Si uu u dhaqan galo qaraarka Golaha Ammaanku wuxuu u baahnaa sagaal cod iyo in aysan codka qayaxan ku diidin shanta xubnood ee joogtada ah oo kala ah Maraykanka, Faransiiska, Ruushka, Ingiriiska iyo Shiinaha.
Maxay tahay sababta ay Ruushka iyo Shiinuhu codka qayaxan u adeegsadeen?
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in “sinaba ku haboonayn” cunaqabatayno ka saaro Suuriya”, isaga oo sheegay in ay wax dhibaato u gaysanayso oo wax u dhimayso kalsoonidii” wadahadallada.
Ruushka ayaa calaaqaad soo jireen ah la lahaa Suuriya iyadoo milatari badan oo Suuriyaan ah ay tabobar iyo qalabba ka heleen Ruushka Xukuumadda Moskana waxay sheegtay in taageerada milatari iyo mida siyaasadeed ee ay dawladda Suuriya siinayaan ay gacan ka gaysatay malayshiyada isku magacawda Dawladda Islaamka.
Laakiin reer Galbeedka ayaa Ruushka ku dhaliilay in uu bartilmaameedsanayo mucaaradka Suuriya ee ay taageerayaan reer Galbeedku.
Safiirka Shiinaha u qaabilsan Qaramada Midoobay Liu Jieyi, ayaa sheegay in inkastoo dalkiisu ka soo horjeedo in hub kiimiko ah la adeegsado haddana ay noqonayso arrin lagu degdegay in cuno qabatayn la saaro Suuriya iyadoo ay wali socdaan baaritaannadu.Safiirka Maraykanka eeQaramada Midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in ay maalin murugo leh u tahay Golaha Ammaanka marka xubnaha ku jira ay marmarsiinyo u sameeyaan dal uu dadkiisa laayo.
“Xukuumadda ay saaxiibaha yihiin ee Assad ayay ka hor mariyeen ammaankii caalamka, arrintaas oo caalamka ka dhigayso meer sii halis ah.
Safiirk UK Matthew Rycroft ayaa sheegay “in aan ficil laga qaadin adeegsiga hubka kiimikada ah in ay wax u dhimayso kalsoonidii beesha caalamka ee ahayd in ay wax ka qaban karaan jabibta qawaaniinta caalamiga ah, ayna hoos u dhigayso kalsoonidii ay qabeen dadkii Suuriyaaanka ahaa ee ay dhibaatadu ka soo gaartay weerarkii arxan darrada ahaa”.